Adị m onye Mgbakwunye na ogologo oge ahịa nke Depositphotos. Ha nwere nhọrọ dị egwu nke onyonyo, faịlụ vector (EPS), na vidiyo na saịtị ha yana ụfọdụ ọnụahịa na ikikere pụrụ iche. Nke a bụ otu m si eji Google Image Search chọta ihe mgbakwunye ndị ọzọ na saịtị ha nke dabara na otu styling.
Nchọta foto Google na-enye ihe bulite icon ebe ị nwere ike bulite sample image na ị chọrọ ịchọ. Enwekwara nhọrọ iji tinye ihe oyiyi URL ma ọ bụrụ na ịmara ebe ihe oyiyi ahụ bi na saịtị gị.
Ugbu a enwere m ike ịchọgharị Depositphotos site na nsonaazụ ndị a, chọta onyonyo ma ọ bụ ọba akwụkwọ ndị yiri nke ahụ, ma jiri ha maka atụmatụ ndị ọzọ anyị na-eke maka onye ahịa ahụ!
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ m maka Depositphotos ke ibuotikọ emi.
Tags: mbọnnkwụnye egoEPSgoogle image searchoke ọchụchọ googleonye ihe ngosiọchụchọ saịtịnyocha saịtịfoto ngwaahịangwaahịa vektọfaịlụ vektọ